Freesample ChinaCAS: 288573-56-8,1-BOC-4- (4-FLUORO-PHENYLAMINO) -PIPERIDINE ụlọ ọrụ na ndị na-eweta ngwaahịa | Binshare
Aha aha Bekee: KS00371,1-dimethylethyl ester CAS 288573-56-81-tert-butoxycarbonyl-4-[(4-fluorophenyl) amino] Piperidine High Ọcha [(4-fluorophenyl) amino4-[(4-fluorophenyl) amino]-- CAS 288573-56-81-BOC-4- (4-FLUORO-PHENYLAMINO) -PIPERIDINE1-Piperidinecarboxylicacid CAS 288573-56-81-Piperidinecarboxylic acid, 4-[(4-fluorophenyl) amino]-, 4-(1, 1, 1) - dimethylethyl estertert - butyl 4 - fluoroanilino) piperidine - 1 - carboxylate
Ụdị usoro: C16H23FN2O2
Ibu arọ: 294.36
EINECS enweghị. : 200-533-0
Njupụta: 1.159 + / - 0.06 g / cm3 (Amụma)
Ọnụọgụ acid: (PKA) 5.09 ± 0.20 (Amụma)
100g/500g/1kg/5kg/10kg/25kg/200kg ma ọ bụ dịka arịrịọ gị pụrụ iche
100g/500g/1kg/5kg/10kg/25kg juru na akpa foil Aluminium, karama fluorinated, Drums Carrum ma ọ bụ dịka arịrịọ pụrụ iche gị.
1. Enwere m ike nweta ụfọdụ nlele?
Ee, anyị nwere ike ịnye nlele efu, mana ndị ahịa ga -akwụ ụgwọ mbupu.
2. Kedu maka oge nnyefe?
Oge nzipu: ihe dị ka ụbọchị 3-5 ka ekwenyechara ụgwọ. (Agunyeghị ezumike ndị China)
3. Enwere mwepụ ego?
Ọnụ ọgụgụ dị iche iche nwere ego dị iche iche.
4. Kedu ka esi kpọtụrụ anyị?
Ị nwere ike ịkparịta ụka anyị site na Trademanager, MSN & Skype Online. Ị nwere ike họrọ ngwaahịa nwere mmasị ma zitere anyị ajụjụ. Ị nwere ike ịpị ekwentị anyị ozugbo, ị ga -enweta azịza anyị. Zitere anyị Email.
5. Kedu otu esi egosi ịdị mma ngwaahịa tupu itinye iwu?
Ị nwere ike nweta nlele efu maka ụfọdụ ngwaahịa, naanị ị ga -akwụ ụgwọ mbupu ma ọ bụ dozie anyị onye na -ebuga anyị akwụkwọ wee were nlele ndị ahụ. Ị nwere ike izitere anyị nkọwa ngwaahịa na arịrịọ gị, anyị ga -emepụta ngwaahịa dịka arịrịọ gị siri dị.
5.we nwere ụlọ ọrụ nyocha ọkachamara yana anyị na -ejikwa njikwa njikwa ike.we na -ejikwa ogo site na akụrụngwa ruo ngwongwo emechara.
Nke gara aga: Nitroimidazole dị ọnụ alaCAS: 527-73-1
Osote: CAS dị ọnụ ala: 1451-82-7,2-BROMO-4′-METHYLPROPIOPHENE